Coming of Age – The Ulwazi Programme
Izilinga (Ukuphuma kwamabele)
Izilinga ukuphuma noma ukuhlosa kwamabele okuqala entombazaneni. Ukuphuma kwamabele okokuqala entombazaneni, ingakathombi kwaZulu kuyinto engamukelekile abntu abadala babeyithatha njengomhlola. Nakuba kunenkolelo yokuthi uma lokhu sekwenzekile enganeni ubudala sebusondele. Ubudala babuhlonishwa futhi busatshwa ngenxa yobunzima nezobopho eziza nobudala. Ngokuka Mrs Shange uma kwenzekile enganeni yentombazane ukuthi iphume amabele ingakathombi isalukazi noma umama osemdala wayephebeza noma abhule noma … Read more